IZIHLOKO:Online Isitolimende LoansOnline Isitolimende Loans Amaqiniso
Uma uke bachitha yisiphi isamba esithile inthanethi ukusesha amazwi anjengokuthi "isitolimende loans inthanethi,"Khona-ke ubungeke kuye kwadingeka yokuthengisa kuzilandeleli ezifana" osheshayo payday loans,"" Ukwamukelwa osheshayo,"" Akukho ukuhlola credit,"Futhi" ukwamukela kuze kube $$$$ "phakathi kwabanye.
Nakuba eziningi zalezi kuzilandeleli yokuthengisa ezingelona iqiniso ngokuphelele noma amanga - abayikho emigomeni eziningana noma izimo - futhi lapha amaqiniso kumelwe ukwazi isitolimende loans inthanethi ngaphambi kokufaka isicelo sokuba omunye. Ngcono, futhi waqinisekisa wena ngalezi amaqiniso sikuhlomele kahle wena ukwenza izinqumo ezinolwazi ukuthi "okusheshayo payday loans" ngeyakho.
Isitolimende loans akumelwe aphanjaniswe no-payday loans
Online isitolimende ukubolekisa zihambisana inthanethi payday loans kodwa akumelwe kudidaniswe nomunye baba. Online isitolimende ukubolekisa kukhona ukubolekisa lakhishwa kusukela izinkampani obolekisayo inthanethi kanye okuyinto kumelwe abuyiselwe in izitolimende bavumelana phezu ngesikhathi esinikeziwe - ngezinye izikhathi izinyanga eziyisithupha, kodwa inthanethi payday loans ngokuvamile ukuba ibuyiswe nge elilandelayo kwenyanga emholweni wakho e isamba semali.
Isitolimende ukubolekisa kungenziwa kuvikelwe noma okungaphephile
Kuvikelwe ngalo mqondo libhekisela nokuvikeleka okuhambisayo njengoba imfuneko ngoba loan. Isitolimende loans kungaba kokubili kuvikelwe noma okungaphephile kuye ngohlobo noma injongo imalimboleko. Kungase kudingeke ukuba uvikele i loan noma anikele ukuphepha eseduze uma ufaka isicelo mortgage noma auto ukubolekisa, lapho umbolekisi amandla ukuyokudla noma ukuthengisa off eseduze yakho uma uhluleka ukukhokha. Kodwa ungase ufinyelele loan okungaphephile uma kuba ngezizathu eziqondene nawe - okungukuthi udinga loan siqu okuyinto bazokhokhelwa nge kwenyanga umholo. Esimweni esinjalo, umbolekisi kuqinisekisa kuphela uku gainfully abazisebenzayo kanye nomholo nyangazonke uzisibekele ngoba loan ngaphandle izinkathazo.
Awukwazi ukufaka isicelo isitolimende ukubolekisa ngaphandle isimo sakho
Kukhona ezinye izimo kumele ukuhlangabezana ngaphambi abakufanelekelayo anikezwe isitolimende ukubolekisa. Esinye sazo Kufanele ube ngaphezulu 18 iminyaka futhi ube nokahle. Akekho uzokunika loan isitolimende uma ungenalo umsebenzi engaguquguquki nge ngihola kahle. Esinye isimo futhi ukuthi kumelwe sisebenzise sokubolekwayo ngaphakathi isimo lapho wena hlala - okusho ukuthi ngeke ukwazi ukusebenzisa i-loans Colorado uma uku ohlala Ohio. Kungase kube okuhlukile kulokhu uma ufaka isicelo ku-inthanethi, kodwa ke kuzodingeka ukunikeza inombolo yakho social security kanye / ukuhlolwa noma ukonga akhawunti yamanje.
Kukhona izimali ezikhokhwayo kanye rates fixed kumelwe ucabangele ngaphambi kokuqhubeka
Kubalulekile ukwazi ukuthi isicelo se-isitolimende ukubolekisa uyokhanga izimali ezikhokhwayo ngoba ababolekisi ebhizinisini ukwenza imali. Ngezinye izikhathi lapho benzelwe zenzalo ukuthi likhuphukela uma okumisiwe etsheleka ngokulinaka ngesikhathi. Lokhu kusho kungenzeka ekugcineni sizinake ngaphezu zenzalo kuka isamba wena ezibolekwe ngaphandle inani langempela wena ukuboleka futhi kufanele abuyisele - lapho uhluleka ukukhokha emuva phezu eziningi izinyanga noma iminyaka.
Isitolimende ukubolekisa kukusiza ukuba silondoloze ezinhle credit amaphuzu
ngokuvamile ababoleka imali ziyazi ukuthi ngeke sifanelekele ukuthola imali-mboleko yendlu uma isikweletu embi. Ngakho balwela ukugcina ezinhle credit amaphuzu ngaphambi kokuba isicelo isitolimende ukubolekisa. Amakhasimende futhi ukuthi isilinganiso sabo credit iyoba ezilimele uma okumisiwe ngokulinaka noma ukhokhe ebusuku. I ngaphambili ukhokha loans akho in izitolimende, ngcono yakho isilinganiso credit iba.
Sebenzisa ku-intanethi wokubala ithuluzi nokufunda le mikhondo esihle
ababolekisi amaningi we-intanethi babe namathuluzi isithakazelo wokubala okuyinto ongazisebenzisa ukuze ukubala malini ngizokubuyisela ngesithakazelo phezu ubude besikhathi ukhetha. Udinga nje kuphela ukuba ufake lemali ufisa ukuboleka futhi ubude besikhathi ufisa ukukhokha emuva ukubona lemali isilinganiso ngenxa nyangazonke ukuboniswa kuwe. Lokhu kuzuzisa ngoba ngezinye izikhathi ungase ukuboleka loans inthanethi ngokusebenzisana ne wokubala inthanethi bese ugcwalisa amafomu adingekayo kanye ngaphandle ukukhuluma noma ukuxoxa nanoma ubani. Lapho imigomo nemibandela ziboniswa kumasayithi ababolekisi inthanethi ', kungcono ufunda lokhu kuqala ukuba azisiwe kangcono konke okudingayo ukuze ukwazi.
Phenya inkampani loan ngaphambi kokufaka isicelo kubo
Kukhona ababolekisi wendabuko usebenza like amabhange evamile, kodwa ukuvelela intanethi yebhange kuye kwaholela ngokuchichima loan ababolekisi kwi-inthanethi. ababolekisi abaningi emoyeni rogues nangaphakathi waklebhula off by kokukukhokhisa izimali kakhudlwana futhi ofuna ephakeme zenzalo. Ngakho kumele aphenye kahle ukuqinisekisa umbolekisi oyikhethile uthola ukuvunyelwa futhi zalayisenswa ezifanele emizimbeni ebusayo ngaphambi kokuqhuba nabo ibhizinisi.
Iba ngowokuqala ukuphawula on "7 Amaqiniso okumele niyazi ngaphambi kokufaka isicelo sokuba Online Isitolimende Loans"